ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးဝင်းမြိုင်၊ Fortify Rights ဘယ်သူ့ ကိုယုံမလဲ | ဧရာဝတီ Irra Wadi
← ဒူချီရာတန်းတွင်ရခိုင်လုံထိန်းများကရိုဟင်ဂျာ ၂၀ ဦး အား သတ် ဖြတ် အလောင်း ဖျောက် ဆောင်း ပါး၊ New York Times
Rise in Bigotry Fuels Massacre Inside Myanmar →
ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးဝင်းမြိုင်၊ Fortify Rights ဘယ်သူ့ ကိုယုံမလဲ	Posted on March 4, 2014	by irrawadi http://burmese.rohingyablogger.com/2014/03/fortify-rights.html#sthash.VjVhRJHO.dpuf
This entry was posted in အထူးဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	← ဒူချီရာတန်းတွင်ရခိုင်လုံထိန်းများကရိုဟင်ဂျာ ၂၀ ဦး အား သတ် ဖြတ် အလောင်း ဖျောက် ဆောင်း ပါး၊ New York Times